Kugadzira pasi michina vagadziri uye vanotengesa - China KUSVIRA MACHINI MACHINES Factory
Zvicherwa zvidiki, izvo zvinogona dzimwe nguva kuzivikanwa sevanochera mini vanogona kubatsira kuita akasiyana siyana emabasa ekuvaka emaindasitiri nekutengesa. Kazhinji kubva pa1 tani kusvika kumatoni gumi, ichi chidiki chidiki chinokupa iwe kugona kuwedzera kugadzirwa uye nguva yekuwedzera mune yakaoma uye yakavharirwa mamiriro ekushanda.
Amphibious excavator inonzi zvakare inoyangarara excavator, iyo yakagadzirirwa kunyatso shanda panzizi, madhamu ane madutu, migero uye kugadzirisa nzvimbo dzekugadzirisa dzimba. Tine timu yehunyanzvi yekugadzira uye tsika inogadzira mhando yepamusoro uye mhando dzakasarudzika dzevanocheka vepamphibious kune ese makuru mabrandari evatangi kubva pamashanu kusvika pamatani makumi mashanu. Bonovo timu inokwanisa kupa akasiyana mapurojekiti eprojekiti kusanganisira kupomba pombi, kufamba-refu nzira, kurodha chikuva, chikamu chechikamu uye marefu kusvika maoko.
Sarudza chaiyo mini excavator yebasa rako yakakosha kuti uwedzere kugadzirwa. Bonovo inogona kupa akasiyana mamodheru kuti akwane basa rako chairo, zvisinei kuti urikutsvaga chinokambaira kana chevhisi yekuchera, Bonovo inogona kukupa iyo yekufungidzira huremu hwekushandisa kubva pa0,7 kusvika ku8.5 tonnage.
Bonovo mini zvigadzirwa zvekuchera zvakagadzirirwa maanoshanda kuti asimudzire kabhu kunyaradza uye kuchengetedza mafuta maficha anounza kuwanda kwakawanda, kugona uye kugadzirwa kune rako basa saiti. Iwe unogona kusarudza zvakabatanidzwa zvekuchera zvakaenzana kuti zvikwane mabasa ako chaiwo, timu yeBonovo inogona kukupa iwe akanakisa ekuchengetedza zvikamu uye neshure-rekutengesa sevhisi.